ရိုးရှင်းသောသကြားကတ် (ကခြစ်ရာမှ) FOOL-PROOF - ကွတ်ကီး
အကောင်းဆုံးသကြား cookie စာရွက်
ရိုးရှင်းသောသကြား cookie ချက်ပြုတ်နည်းသည်အံ့သြဖွယ်အရသာရှိပြီးမုန့်ဖုတ်သောအခါပုံသဏ္holdsာန်ရှိသည်
မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါရမီရှင်များထံမှရိုးရှင်းသောသကြားချက်ပြုတ်နည်း Susan Trianos ချိုမြိန်လှပြီးနူးညံ့ပြီးဖုတ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္keepsာန်ကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်။ သင်ထည့်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သောအရသာများနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့များမှာ!
Susan ကသူမအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရိုးရှင်းတဲ့သကြား cookie စာရွက်ကိုဘယ်လိုပြုလုပ်နည်းကိုပြသည် ကိတ်ဂေါ်ပြားက cookie သင်ခန်းစာကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည် Sugek Geek ပြပွဲတွင်! ဤသင်ခန်းစာတွင်အထောက်အကူပြုသောအချက်အလက်များပြည့်နှက်နေပြီး၎င်းသည်မုန့်စိမ်းထက် ကျော်လွန်၍ တော်ဝင်အေးခဲစေရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်၊ စနစ်တကျပါးလွှာအောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်၊ ငါသည်ဤသင်ခန်းစာကြည့်ရှုဤမျှလောက်လေ့လာသင်ယူ!
ရိုးရိုးသကြားချက်ပြုတ်နည်းကိုချက်ပြုတ်ခြင်းသည်မုန့်ဖုတ်သမားလုပ်နိုင်သမျှသောလွမ်းဆွတ်ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသော cookie တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်အလွန်ရိုးရှင်းစေရန်သင်ပေါင်းထည့်ထားသောနံ့သာမျိုးနှင့်အရည်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်ရွေးချယ်မည့်ရွေးချယ်မှုများသည်သင်နှင့်သင့်အတွက်မည်သည့်အရသာဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ သင်သည်ဤရိုးရှင်းသောသကြား cookie စာရွက်ကိုပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်း၎င်းသည်နောက်ဆုံးနှင့်အလွန်ကွဲပြားနိုင်သည်။
အဘယ်အရာကသကြား cookie ကိုဝါးစေသည်နည်း။
မြင့်မားသောအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည်သင်၏ cookies များကိုကိုက်ညီမှုရှိသည်။ သင်ရှာဖွေနေသောအစိုဓာတ်ရရှိရန်အတွက်စာရွက်၊ မုန့်ဖုတ်ချိန်နှင့်အပူချိန်ကိုချိန်ညှိရမည်။ ပထမ ဦး စွာသင်သည်အညိုရောင်သကြားကိုအသုံးပြုပါကရေ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သောသကာရည်ပါဝင်သည်ကိုသင်သတိရရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျထောပတ်, ဥနှင့်အညိုရောင်သကြား၌မုန့်ညက်နှင့်ရေကိုခညျြနှောငျသောအခါ, ရေငွေ့ပျံနှေးကွေး။ မုန့်စိမ်းသည်မုန့်ညက်အနည်းငယ်လိုအပ်သဖြင့်၎င်းသည်မုန့်စိမ်းကို ပို၍ တင်းကျပ်စေသည်။ သင့်တွင်တင်းကျပ်သောမုန့်စိမ်းရှိပါကအရည်သည်အငွေ့ပျံမှုနည်းသောပျံ့နှံ့မှုနှင့်ကွတ်ကီးသည်ပိုမိုပျော့ပြောင်းပြီး chewy cookie နှင့်ညီမျှသည်။
သင်သည်သင်၏ cookie စာရွက်တွင်အစားထိုးသောအခါပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်တူညီသောအစိုဓာတ်ပမာဏမပါရှိကြောင်းအမြဲသတိရရန်လိုအပ်သည်။ သင်အစားထိုးနေသောအရာသည်တူညီသောဂုဏ်သတ္တိများရှိမရှိကိုအရင်စဉ်းစားရန်လိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အညိုရောင်သကြားဓာတ်၌သကြားဖြူထက်အစိုဓာတ်ပိုများသောကြောင့်သင်အညိုရောင်ကိုထုတ်ယူပြီးအဖြူရောင်ဖြင့်အစားထိုးပါကသင်က crunchier cookie ဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
သင်၏ကွတ်ကီးများထုထည်ကယင်းသည်ပီကေဝါးကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်တော်က chewy cookie ကောင်းတစ်ခုလိုချင်လို့ပိုကြီးလေ့ရှိတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ပိုကြီးသောဒြပ်ထုတစ်ခု (cookie) တစ်ခုကိုအပူချိန်မြင့်မားသောအချိန်တွင်နည်းနည်းဖုတ်လျှင်သင်ပြန့်ပွားမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပေးပါကအလယ်တွင်ဝါးနေပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါက chewy cookie တစ်ခုအတွက်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။ သူတို့ကို to0 ရှည်လျားသောဖုတ်မထားပါနဲ့။ သင်က cookie ကိုအပြင်ဘက်တွင်အနည်းငယ်အညိုရောင်ဖြစ်နေပြီးအလယ်ဗဟို၏အနည်းဆုံးသုံးပုံတစ်ပုံသည်အဝါရောင်ဖြစ်နေသောအခါသင်ကသူတို့ကိုမီးဖိုထဲမှဖယ်ထုတ်ပစ်လိုသည်။ အစောပိုင်းကမီးဖိုထဲမှ cookies များကိုဖယ်ရှားခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်သင်သည်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောဗဟိုချက်ရှိလိမ့်မည်။ ကိုယ်နှစ်သက်သော!
အဘယ်အရာကိုတစ် ဦး crispy cookie ကိုစေသည်?
ဒီမှာ၊ သင်အထက်ပါအကြံပေးချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုချင်ပါသည်။ အဲဒီအစားအစိုဓာတ်ပိုများသောပါဝင်ပစ္စည်းများတိုးမြှင့်ခြင်းထက်, သင်ကသူတို့ကို crispier cookie ကိုရလဒ်သောသူတို့ကိုလျှော့ချချင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်လျှော့ချနိုင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများမှာဂျုံမှုန့်၊ ကြက်ဥနှင့်အညိုရောင်သကြားဖြစ်သည်။ ထိုပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချခြင်းသည်မုန့်ဖုတ်စဉ်အတွင်းအရည်အရည်ကိုအငွေ့ပျံစေရန်လွယ်ကူစေသည်၊ နို့၌ dunking များအတွက်ကြီးသော။
နောက်အစွန်အဖျားကသူတို့ကိုအကြံပြုထားတာထက်နည်းနည်းပိုကြာအောင်ဖုတ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမဲ့အပူချိန်နိမ့်ကျအောင်သေချာအောင်လုပ်ပေးပါ၊ မင်းသူတို့ကိုမီးမလောင်စေချင်ဘူး။ ဒါကမင်းအတွက်သင်စဉ်းစားနေတဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူး။
အိမ်လုပ် gummy ဝက်ဝံစာရွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
အဘယ်အရာက cookies များကို puffy ဖြစ်စေသနည်း။
အကယ်၍ သင်သည်အလင်း၊ မာနထောင်လွှားသောကွတ်ကီးကိုသွားနေလျှင်၊ သင်သည်အတိုကောက်သို့မဟုတ်မာဂျရင်ကိုသုံးရန်ကြိုးစားသော်လည်းသင်သုံးသောအဆီပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ကြက်ဥအပိုတစ်လုံးထည့်ပြီးသကြားကိုပြန်ထည့်ပါ။ ပိုမိုနူးညံ့သောကွတ်ကီးတစ်ခုအတွက်နောက်ထပ်အချက်မှာကိတ်မုန့် (သို့) pastry ဂျုံနှင့်ဆိုဒါမုန့်ဖုတ်မည့်အစားမုန့်ဖုတ်အမှုန့်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ကွတ်ကီးတွေကိုမဖုတ်ခင်သင့်ရဲ့မုန့်စိမ်းကိုလည်းရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားပါ။
ဆိုဒါမုန့်ဖုတ်ခြင်းသည်သင်၏မုန့်စိမ်းကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့မှထုတ်လွှတ်သည်။ ဤသည်ပျော့ပျောင်းသော cookie ကိုဖန်တီးပေးသည်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါသည်များသောအားဖြင့်အက်ဆစ်ပါဝင်သည့်ချက်ပြုတ်နည်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရှလကာရည်, ချဉ်သောမုန့်သို့မဟုတ် Citrus အဖြစ်။
မုန့်ဖုတ်သောအမှုန့်သည်အက်စစ်နှစ်မျိုးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဓာတုတဆေးဖြစ်သည်။ မုန့်ဖုတ်အမှုန့်သည်ဤနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်မုန့်ဖုတ်မှုန့်ကိုအသုံးပြုသောအခါအသက်သွင်းရန်မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည် buttermilk, ချဉ်သောမုန့်သို့မဟုတ်အက်စစ်အက်စစ်ကဲ့သို့သောသင်၏မုန့်စိမ်းတွင်အပိုပါဝင်ပစ္စည်းများမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကိုမုန့်စိမ်း (သို့) Battery တွင်ထည့်သောအခါကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်သောကွတ်ကီးများတက်လာပြီးဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည်။
သင်ကမုန့်ဖုတ်အမှုန့်ကိုမေ့သွားလျှင်သင်ဖြစ်ကောင်းအချို့ပြားချပ်ချပ်, Hard cookies များကိုအတူတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့်ငါ၏အ cookies တွေကိုဤမျှလောက်ပျံ့နှံ့သလဲ?
အအေးမီးဖိုသည်သင်၏ကွတ်ကီးများနှင့်အလွန်ပူပြင်းသည့်မီးဖိုများကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနိုင်သဖြင့်သင်သည်ဘာမှမလုပ်မီသင်၏အပူချိန်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးလိုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏မီးဖိုသည်မုန့်စိမ်းထဲ၌ရှိသောထောပတ်ကိုပူရန်လိုပါကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အရည်ပျော်သွားနိုင်ပြီးမုန့်ညက်အရောအနှောမခိုင်မာမီသင်၏ cookies များကိုပြန့်နှံ့သွားစေသည်။ မီးဖိုဖုတ်များသည်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကအစုတစ်ခုလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်တွင်စမ်းသပ်မှု cookies များကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အိမ်လုပ် cookies တွေကိုဘယ်လိုနူးညံ့စေသလဲ။
ဒီမှာငါလုပ်ပေးမယ့်သင်အတွက်အိမ်လေးတစ်ခုပါ။ ငါမုန့်တလုံးကိုယူ (အဖြူကအကောင်းဆုံးကသင်၏ cookies များကိုမှအရသာင်လွှဲပြောင်းမပေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသင့်ရဲ့ cookies တွေကိုမှအရသာ) နှင့်ထို့နောက်တစ် ဦး ကွန်တိန်နာထဲမှာထားပါ။ ကွတ်ကီးတစ်ဒါဇင်လျှင်ပေါင်မုန့်တစ်ဖဲ့သုံးပါ။ ကွတ်ကီးများသည်ပေါင်မုန့်မှအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူရာခြောက်သွေ့ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ cookies များကိုကြာရှည်စွာပျော့ပျောင်းစေလိမ့်မည်။
သကြားကွတ်ကီတွေဟာသင်ကသူတို့ကိုအေးမြခြောက်သွေ့တဲ့ဗီရိုတစ်ခုမှာ (သို့) panty ထဲမှာသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်သိုလှောင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဤနေရာများသည်နစ်မြုပ်ခြင်း၊ မီးဖိုနှင့်မီးဖိုများနှင့်ဝေးဝေးနေပါစေ။ သူတို့ကသုံးပတ်လောက်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ် သူတို့ကိုသုံးလအထိအေးခဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သင့်တွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောတံဆိပ်ခတ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အိတ်တစ်လုံးလျှင် cookies အနည်းငယ်သာထုပ်ပိုးနိုင်သည်။ ဘယ်သူမှအရသာမကြိုက်ဘူးရေခဲသေတ္တာသည်သူသို့မဟုတ်သူမ cookies များကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။
သင်က cookie အိုးတစ်လုံးဝယ်ဖို့ဆင်ခြေတစ်ခုလိုတယ်ဆိုတာငါသိတယ်
ခြစ်ရာကနေအိမ်လုပ် vanilla ကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်နည်းများ
သငျသညျသငျသညျသူတို့၏ပုံသဏ္keepာန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သကြား cookies တွေကိုဘယ်လိုရသနည်း
အချင်းလူတို့၊ ကျွန်ုပ်၏သကြားကွတ်ကီးများကသူတို့၏ပုံသဏ္holdာန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ကောင်းသောလှည့်ကွက်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီ။ ဦး စွာ၊ သင်၏မုန့်စိမ်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက်မျက်နှာပြင်နှင့်လှိမ့်တံသင်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားပါ၊ မုန့်စိမ်းကိုလှိမ့်ပြီးနောက်သင်၏ပုံသဏ္ဌာန်များကိုဖြတ်တောက်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏ကွတ်ကီးစာရွက်ပေါ်တွင်သားရေစာစက္ကူသို့မဟုတ် silpat (ကျွန်ုပ်သုံးသောပစ္စည်း) ဖြင့်ကပ်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုရေခဲသေတ္တာထဲ ၁၀ မိနစ်ခန့်ထားပါ။
သူတို့ကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှထုတ်ပြီးသင့်အပူမတိုင်မီအပူပေးထားသောမီးဖိုထဲသို့ထည့်ပါ။ သငျသညျလုံးဝအပြောင်းအလဲများအတွက်ဒီလုပ်နိုင်, (ငါ့ကိုကဲ့သို့သင်တို့နှင့်ငါ့ silpat fit ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့ cookie ကိုစာရွက်တစ်ခုရှိပါက) လိပ်, ဖြတ်, အေးခဲ, မုန့်ဖုတ်နိုင်ပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်နေစဉ်, ငါလှိမ့ဖြတ်, အေးခဲ, ပြီးတော့လာမည့်အသုတ်ဖုတ်ရမည်။
ပိုမိုလေ့လာလိုသည်။ Susan Trianos မှသင့်၏ cookie သင်ကြားပို့ချချက်ကိုဖတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်လား စိတ်မပူပါနဲ့ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုတက်ချိတ်ဖို့အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးရရှိပါသည်
သငျသညျအသီးအသီးအချိန်perfectlyုံပုံသကြား cookies တွေကိုအတူတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်! နောက်ဆုံးအနေနဲ့လွယ်ကူတဲ့သကြား cookie ချက်ပြုတ်နည်းဟာလုံးဝမအောင်မြင်ပါဘူး။
ရိုးရှင်းသောသကြား cookie စာရွက်ကိုမည်သည့်အားလပ်ရက်ဖြစ်စေ၊ သူတို့ကလွင်ပြင်ကိုစားနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ပီပီနှင့်အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ် အိမ်လုပ် fondant , မော်ဒယ်ချောကလက် နှင့်သင်တန်း၏ တော်ဝင် icing ။ ဤရိုးရှင်းသောသကြား cookie စာရွက်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးမှာသူတို့နှင့်အတူပေါ်လာသည့်အမှတ်တရများဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်သမီးနှင့်အတူမုန့်ဖုတ်ခြင်းနှင့်သူမ၏အကူအညီများကကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအရသာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူမကိုကြည့်ပြီးသူတို့အလှဆင်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ကိုပေးလိုက်တာကကျွန်တော့်နှလုံးကိုနွေးစေတယ်။
ဤသည်သကြား cookie ကိုစာရွက်ပင် Liz ၏သမီးသူတို့ကိုလုပ်နိုင် SO လွယ်ကူပါတယ်! သူမနှင့် Avalon တို့၏ဤပျော်စရာဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါကသကြား cookie စာရွက်ကိုအတူတူလုပ်ပါ။ ကလေးတွေမုန့်ဖုတ်တာကိုကြည့်ရတာသဘောကျတယ်
ဤတွင် Susan Trianos မှ 'အရာရှိတ ဦး က' စာရွက်သင်ခန်းစာပါပဲ
Susan Trianos သူမ၏လှပသောကွတ်ကီးများကြောင့်လူသိများသော်လည်း၎င်းတို့သည်အရသာရှိသလောက်သင်သိပါသလော။ ဤလွယ်ကူသောသကြား cookie စာရွက်တွင်သင်မုန့်ဖုတ်သောအခါပုံသဏ္keepsာန်ကိုထိန်းထားနိုင်သည့်နူးညံ့သော cookie မုန့်စတိုင်ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာရမည်။ အရသာရှိတဲ့မုန့်စိမ်းကိုမထိခိုက်စေဘဲမွှေနှောက်နိုင်တဲ့အရသာမျိုးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားနိုင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါလိမ့်မယ်။
ပြင်ဆင်ချိန် -နှစ် နာရီ ၃၀ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -ဆယ့်ငါး မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:နှစ် နာရီ လေး မိနစ် ကယ်လိုရီ322kcal
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) မလတ်ထားသောထောပတ် အခန်းအပူချိန်
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) granulated သကြား
▢၁၈ oz (510 ဆ) AP ဂျုံမှုန့်
▢1 1/2 Tsp (1 1/2 Tsp) မုန့်ဖုတ်ပေါင်ဒါ
▢၁ Tsp (၁ Tsp) နို့
▢1/4 Tsp (1/4 Tsp) သစ်ကြံပိုးခေါက် (optional)
အခန်းအပူချိန်ထောပတ် (ဆားမပါ ၀ င်သောထောပတ်ဖြစ်လျှင်ဆား) နှင့်သကြားဓာတ် ၁ ခွက်ကိုမတ်တပ်ရပ်။ ရောစပ်။ လှော် တွဲ၍ ရောစပ်ပြီးချောမွေ့သည်အထိအနိမ့်တွင်ရောပါ။ Creamed butter သည်အရောင်ဖျော့ဖျော့ဖြစ်ပြီးအဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ဖြစ်သင့်သည်။
ကြက်ဥထည့်ပြီးအလယ်အလတ်တန်းစားတွင်ရောနှောပါ (Kitchenaid ရောနှောပါ ၀ င်သော ၄ ခု) သည်အရောအနှောရောမွှေပါ။ ကြက်ဥတွင်ပါ ၀ င်မှုသေချာစေရန်လိုအပ်သည့်အခါပန်းကန်လုံးကိုခြစ်ပါ။
vanilla ထုတ်ယူထည့်ပါ။ ရုံထည့်သွင်းသည်အထိရောမွှေပါ။
သီးခြားပန်းကန်လုံးတွင်ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများ (AP ဂျုံမှုန့်၊ မုန့်ဖုတ်အမှုန့်၊ အခွံမာသီး) ကိုအတူတူသုတ်ပါ။
ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရပ်တန့်ရောနှောသည့်နေရာတွင်ထည့်ပါ။ (တစ်ချိန်တည်းခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများ၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်) နှင့်အပြည့်အဝထည့်သည်အထိရောနှောပါ။ မုန့်ညက်စတင်ထည့်သွင်းသည်အထိသည်အထိနှေးနှေးရောနှောစတင်, ပြီးတော့အလတ်စားအထိလှည့်။ အပြည့်အဝထည့်သွင်းရန်လိုအပ်အဖြစ်ခြစ်ပန်းကန်လုံး။
ရောနှောထားသောပန်းကန်လုံးကိုထုတ်ယူပါ၊ သကြား cookie မုန့်စိမ်းကိုပလပ်စတစ်ဖြင့်ထုပ်ပြီးရေခဲသေတ္တာတွင် ၂ နာရီခန့်ထုပ်ပါ။
ကွတ်ကီးမုန့်စိမ်းကိုဒူးထောက်ပြီးပိန်သွားသည့်အထိ cookie မုန့်စိမ်းကိုလှိမ့်လှန်ပါ။ ယူနီဖောင်းပုံစံများကိုဖြတ်တောက်ရန် cookie ဖြတ်စက်ကိုသုံးပါ။
ကွတ်ကီးများကိုမုန့်ဖုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်နံရံစာရွက်ပေါ်တွင်ကပ်ထားပါ။ cookie စာရွက်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲပြန်ထည့်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ပြန်လည်အေးပါ။
ကွတ်ကီး၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ရေခဲသေတ္တာ ၃၅၀ ºFတွင် ၁၀-၁၄ မိနစ်ဖုတ်ရမည်။ ကွတ်ကီးများသည်အစွန်းပေါ်တွင်အနည်းငယ်ရွှေအညိုရောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အအေးခံသောမုန့်စိမ်းမုန့်စိမ်းများသည်၎င်း၏ပုံသဏ္keepာန်ကိုမီးဖို၌သိုထားမည်၊
အားလုံးစတိုးဆိုင်ဝယ်ကြက်ဥ pasteurized ဝယ်ကြသည်
Berry ဟာ chantilly ကိတ်မုန့်တပြင်လုံးကိုအစားအစာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်
ဘယ်မှာ Pasteurized shell ကိုကြက်ဥဝယ်ဖို့